Isicatshulwa esicetyiswayo: Idilesi yethu yewebhusayithi yile: https://bikehike.org.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Xa iindwendwe zishiya izimvo kwisayithi esiqokelela idatha eboniswe kwifom yeenkcazo, kunye nedilesi ye-IP yeendwendwe kunye nomtya we-arhente yomsebenzisi wesiphequluli ukunceda ukufumanisa ugaxekile.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Ukuba ulayishe imifanekiso kwiwebhusayithi, kufuneka ugweme ukulayisha imifanekiso eneenkcukacha zendawo edibeneyo (i-EXIF GPS) ifakiwe. Ababhenkethi kwiwebhsayithi banokukhuphela kwaye bakhuphe nayiphi na idatha yendawo kwimifanekiso kwiwebhusayithi.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Ukuba ushiya izimvo kwiziko lethu ungakhetha ukungena kwigama lakho, idilesi ye-imeyile kunye newebhusayithi kwi-cookies. Oku kukulungelelaniso ukuze ungagcwalisi kwakhona iinkcukacha zakho xa ushiya enye ingxelo. Ezi khukhi ziza kuqhubeka unyaka omnye.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Amanqaku kule ndawo angabandakanya umxholo ohlanganisiweyo (umz. Iividiyo, imifanekiso, amanqaku, njl). Okufakiwe okuvela kwezinye iwebhusayithi kuziphatha ngendlela efana neyokuba umvakatye uye watyelela enye iwebhusayithi.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Ukuba ucela ukuseta kwakhona iphasiwedi, idilesi yakho ye-IP iya kufakwa kwi-imeyile yokusetha kwakhona.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Ukuba ushiya amazwana, izimvo kunye nemethadatha yayo zigcinwa ngonaphakade. Oku kunjalo sinako ukuqonda nokuvuma naziphi na izimvo zokulandelela ngokuzenzekelayo endaweni yokuzigcina kumgca wokumodareyitha.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Ukuba unayo i-akhawunti kule ndawo, okanye ushiye amazwana, unokucela ukufumana ifayile ekhuphayo yeenkcukacha zobuntu esinazo malunga nawe, kubandakanye nayiphi na idatha oyinike yona. Unokucela ukuba siphume nayiphi na idatha esicacileyo malunga nawe. Oku akubandakanyi nayiphi na idatha esimele siyibophezele ukugcina iinjongo zokuphatha, zomthetho, okanye zokhuseleko.
Isicatshulwa esicetyiswayo: Amagqabaza evakatyekayo angatshekishwa ngesevisi yokufumanisa i-spam.